Desktop မှာ flash တွေထနေလို့... — MYSTERY ZILLION
Desktop မှာ flash တွေထနေလို့...
ကျွန်တော် PC မှာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး ။ 3GP file type တွေကို open တဲ့အခါမှာရယ် ၊ PC က idle ဖြစ်တာကြာသွားတဲ့အချိန်တွေမှာရယ် အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလိုဖြစ်ဖြစ််နေတယ်ဗျာ ။ အဲဒါကလည်း အမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ။ များသောအားဖြင့် 3GP file တွေရှိတဲ့ folder ကို ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ Desktop screen က flash တွေထတယ် ။ pointer ကိုကစားလိုက်ရင်အမည်းရောင်တွေပေါ်လိုက် ၊ အဖြူရောင်တွေပေါ်လိုက်နဲ့ဖြစ်ပြီးဘာကိုမှကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူး။ ဘာကိုဖွင့်ဖွင့်အဲဒီလို Desktop က flash တွေထထနေတယ် ။ right click တောင် click လို့မရဘူး ။ အဲလိုဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်က task manager ကိုခေါ်ပြီး explorer.exe ကို end task လုပ်တယ် ။ ခဏနေမှ explorer.exe ကိုပြန် add ပြီးသုံးတယ် ၊ အဲလိုလုပ်လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားတယ် ။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း explorer.exe ရဲ CPU usage က 30 နဲ့ 40 အတွင်းမှာရှိနေတတ်တယ် ။အဲဒါCPU usage အရမ်းကြီးများတယ်လို့မဆိုနိူင်ဘူးလို့ထင်တယ် ။ ကျွန်တော်က Vista Ultimate ကိုသုံးတာပါ ။ Processor က Core2Duo 2.13Ghz ၊ RAM 2G ပါ ။ အခုကျွန်တော့သူငယ်ချင်းစက်မှာလည်းအဲဒီလိုဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်တော့ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါအုံး ။
ဒါကနောက်တစ်ပုံပါ ။ ပုံတွေကသူငယ်ချင်းစက် (XP) မှာဖြစ်တာကိုတင်ထားတာပါ ။ ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်ပုံချင်းကတူတူပါပဲ ။
GOM Player နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပါလား.... နောက်ပြီး K-lite Code Pack ကောသွင်းထားလား.. မသွင်းထားသေးရင်း သွင်းကြည့်လိုက်ပါ။
GOM player ကိုလည်းသုံးပါတယ် ။ K-lite Code Pack လဲသွင်းထားပါတယ် ။ ကျွန်တော်က GOM ကြောင့်
လို့ထင်နေတာဗျ ၊ GOM ကို online update လုပ်မိရင်ပိုပြီးအဖြစ်များသလိုပဲ ။ GOM ကို uninstall လုပ်ပြီး
သုံးရင်တော့ခဏခဏမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ် ။ ကျွန်တော်ထင်တာလည်းဖြစ်မှာပါ ။ 3GP တွေအတွက် GOM
ကလည်းရှိမှဖြစ်မှာကိုးဗျ....:D...ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးလို့ အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။:77::77::77::77:
အခုလောက်ဆို အဖြေတစ်ခုလောက်တော့ရလောက်ပြီလို့စဉ်းစားထားတာ....:2::2: ဘယ်သူမှလဲမဖြေကြ
ပါလား ။ (ကျွန်တော့်ပြဿနာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး.:77::77:
GOM မသုံးချင်ရင် www.apple.com က QuickTime Player သုံးနိုင်ပါတယ် ..
ဟုတ်ကဲ့............ကူညီအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘာ
ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ် ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာရယ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးဗျာ..
ကျွန်တော်ရောပဲ.. ကျွန်တော်မှာလည်း အဲဒီပြသနာဖြစ်တယ်ဗျ။ အရင်ကတော့ restart ချလိုက်ရင်
ပြန်ကောင်းသွားရော..။ Graphic card error လားလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ နောက်တော့
သတိထားမိတာက jetaudio မှာ သီချင်းတွေအများကြီးထည့်ပြီးဖွင့်ရင်ဖြစ်တယ်ဗျ။ သူ့ကိုပိတ်လိုက်ရင်
အဲလိုမဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒါဘာလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဆိုက်တော်တော်များများမှာ ရှာကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်ညံ့လို့ထင်တယ်.. မတွေ့ဘူး။ ကျွန်တော့်စက်မှာ အခု windows အသစ်တင်ပြီးတော့
သိပ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီပြသနာဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ၀င်ပြောကြည့်တာ။ :39:
antminnyo wrote: »
ဘဝတူတစ်ယောက်ပါလား.........:D.....သူငယ်ချင်းက jetaudio ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့
ဘယ်သူမှလဲမဖြေကြတော့ဘူးထင်တယ်:2::2:........ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံဖူးတယ်တဲ့သူများ ဒီ Thread ကို
ကျတော်လဲ တစ်ခါတော့ ဖြစ်ဘူးပါတယ် .. အဲ့လိုပဲ cmprosser code တွေနဲပတ်သက်တယ်ထင်တာပဲ ဟုတ်တယ် GOM player ကြီးလဲရှိတယ် .. ကြာပါပြီ မှတ်မိေတော့ဘူး .. windows ပြန်တင်လိုက်မိတယ် .. GOM လဲ နောက်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး .. နောက်လဲ မဖြစ်တော့ပါဘူး.. ကျတော်က windows ဆို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးမှကြိုက်တယ် .. အူကြောင်ကြားလုပ်ရင် format ကိုင်ပြီးသားပဲ .. C: Drive ထဲလဲ ဘာ Data မှ မထားဘူး .. Drive ထဲမှာ လိုတဲ့ Drivers နဲ့ Software တွေ အမြဲ ကူးထည့်ထားတယ် .. အော်.. မဆိုင်တာတွေ ရောက်ကုန်ပါပြီ .. အားကိုးလောက်တဲ့ အကြံမပေးနိုင်တာတော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်
Really magic power!I think I should do something for my OP system )
3GP တွေအတွက်က The KMP Player လေးလဲမဆိုးဘူးဗျ။ သူက 3ဂျီပီတင်မက ဖိုင်တော်တော်များများလည်းဖတ်တယ်။ လိုင်စင်ကလည်း ဖရီးဆိုတော့ ရှယ်တာပဲ။ ကျွန်တော်သူ့ကို vlc ထက်တောင်ကြိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဆို အင်တာဖေ့စ်ကလည်းမိုက်တယ်။ Desktop မှာ Flash ထတာကိုတော့ ဂရပ်ဖစ်စ်ကတ်ကိုကောစစ်ပြီးပြီလား။ နောက်ဆုံးသွင်းထားတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးတွေပြန်ဖြုတ်ကြည့်ပါဦး။ ဒါဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ system unstable ဖြစ်တာလို့ထင်တာပဲ... ။ အဆင်ပြေပါစေ..
The KMP Player ကိုကျွန်တော်တင်ပေးပါဦးမယ်.... ။ ဖိုင်က 11M ကျော်နေတော့ ( ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။ bro ရဲ့ မေးလ်သိရရင်ကောင်းမယ်။ yousendit ကနေပို့ပေးမယ်လေ..။
အခုလိုကူညီခေါင်းစားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ...:77:....ကျွန်တော်လည်း player တွေတော်တော်စုံ
နေပါပြီ ။ Graphic Card ကြောင့်လို့ပြောရအောင်လည်း....:39: မဖြစ်နိူင်ဘူးထင်တယ်ဗျ....ဘာလို့လဲ
ဆိုတော့ အဲဒီလိုပုံစံတူတွေကျွန်တော့သူငယ်ချင်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျ.....တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်မရှေးမနှောင်းမှာပုံစံတူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့၊ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ software တစ်ခုခုကြောင့်များလားလို့.......။3GP တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်
တော်အဲဒီလိုဖြစ်တိုင်း 3GP file ရှိတဲ့ folder တွေကိုဖွင့်မိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ ။ အခုနောက်တစ်ခု
ကိုသတိထားမိပြန်ပြီဗျ......... LAN ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာပါ.....file တစ်ခုခုကို copy လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲလို
ဖြစ်လာပြန်ပြီ၊ အဲဒီအချိန်မှာ explorer.exe ရဲ့ Memory Usage က 30 & 40 ကြားမှာရှိနေတယ် ။ အဲဒါ
ကို end task လုပ်ပြီး ၊ ပြန် add: ပြီးသုံးရင်ပြန်ကောင်းသွားပြန်ရော:102:...အစ်ကိုပြောသလိုလည်း
နောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့ software တွေကိုလည်း uninstall လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ ။ မရဘူးဗျ ။ ခက်တာက
ဘယ်လိုအချိန်မှာ အဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ တစ်သတ်မှတ်တည်းမရှိတာပဲ။ အစ်ကိုပြောတဲ့ player တော့
မသွင်းထားဘူး...စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ် ။ အခုလိုကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ။ ဆက်လက်ခေါင်းစား